सदस्यलाई कसरी खुसी र सन्तुष्ट बनाउने ? - सहकारीखबर
सदस्यलाई कसरी खुसी र सन्तुष्ट बनाउने ?
Share : 1,719
(चन्द्रागिरि साकोस थानकोटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णकुमार श्रेष्ठको सदस्यलाई खुसी र सन्तुष्ट बनाउने चार टिप्स)
सहकारी संस्थाको अन्तिम लक्ष्य भनेको यसका सदस्य समुदायका खुसी र सन्तुष्टी हो । वित्तिय तथा अन्य गैर वित्तिय कृयाकलापहरुमा सदस्यहरुलाई सहभागी गराउँदै सुखी र समृद्ध जीवन व्यतित गर्नको लागि विभिन्न समाधानहरु दिन सक्नु सदस्य सन्तुष्टीको उपाय हुन् । सदस्यहरुलाई खुसी र सन्तृष्ट बनाउन संस्थाले निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्दछ ।
१) संस्थामा नयाँ सदस्यहरु थप गर्ने मात्र नभएर प्रवेश भईसकेका सदस्यहरुलाई लामो समय सक्रिय बनाउन सदस्य सम्बन्ध व्यवस्थापनका रणनीतिहरु तयार पारी लागु गर्ने ।
२) सदस्यको हरेक वित्तिय जीवनचक्रको लागि उपयुक्त वस्तु तथा सेवाको विकास गर्ने ।
३) सदस्यको जीवनलाई समृद्ध बनाउने वस्तु तथा सेवा र योजनाहरु बनाई लागु गर्ने ।
४) सदस्य सम्बन्ध विकास, विस्तार र सेवाको गुणस्तर सम्बन्धि कार्यक्रमहरु लागु गर्ने ।
कृष्णकुमार श्रेष्ठको यो लेख पनि पढ्नुहोस् !